Ogaden News Agency (ONA) – Beesha Caalamka oo Cambaaraysay Go’aankii Trump ee Qaxootiga uu Ku Mamnuucay.
Beesha Caalamka oo Cambaaraysay Go’aankii Trump ee Qaxootiga uu Ku Mamnuucay.
Qaar kamid ah madaxda iyo hogaaminta beesha caalamka ayaa cambaarayn kulul usoo jeediyay go’aankii uu Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump uu ku mamnuucay daka soo galootiga ah ee haysta fiisaha dal-kugalka wadanka Maraykanka.
Madaxda talaabadan uu Trump qaaday aadka u cambaaraysay ayaa waxaa kamid ah Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo iyadu cambaareysay xannibaadaha uu Trump ku soo rogay qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda waddamo gaar ah oo Muslimiin u badan.
Afhayeen u hadlay Markel oo lagu magacaabo Steffen Seibert ayaa sheegay in Markel ay rumeysan tahay in dagaalka ka dhanka ah argagixisada uusan qiil u noqonayn in dadka diimaha qaar si gooni ah looga bartilmaameedsado.
Sidoo kale Ra’iisalwasaaraha Britain haweenayda lagu magacaabo Theresa May ayaa sheegtay in aysan taageersanayn go’aanka Trump uu dhawaan ku gaadhay in uu dalka si ku meelgaar ah uga mamnuuco muhaajiriinta iyo dadka ka toddobo waddan oo Muslimiin ah.
Duqa magaalada London Sadiiq Khaan oo ah nin Muslim ah ayaa xannibaaddaasi ku tilmaamay mid ceeb ah isla markaana aad u xun. Waxa uu intaa ku daray in siyaasadda cusub ee Trump ay meel uga dhacday mabdi’a uu Mareykanka ku dhisan yahay oo ah xorriyad iyo dulqaad.
Dhinaca kale Ra’iisalwasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in dalkiisa uu soo dhawayn doono dadka ka soo cararay cabbudhinta, argagixisada iyo colaaddda, iyaga oo aan loo eegeyn diintooda.
Go’aanka Trump uu ku hakiyay dadka ka safraya toddobo dal oo Muslimiinta ay u badan yihiin ayaa waxaa cambaareeyay ururrada xuquuqda aadanaha u dooda ee daafaha caalamka ku nool. Qaramada Midoobeey ayaa ugu baaqday Trump in uu sii wado soo dhoweynta qaxootiga, iyada oo aan la eegeyn jinsiyaddooda, dalka ay ka soo jeedaan iyo diintooda.